दिउसो अफिस वा कार्यक्रम स्थलमा निद्राले सताउँछ ? यसरी हटाउनुहोस् निद्राको समस्या – Etajakhabar
दिउसो अफिस वा कार्यक्रम स्थलमा निद्राले सताउँछ ? यसरी हटाउनुहोस् निद्राको समस्या
काठमाडौँ- जाडोभन्दा गर्मी मौसममा अफिसमा काम गर्नेहरूलाई निद्राले सताउँछ । निद्राले सताएपछि काम गर्न मन लाग्दैन । बिहानको खाना खाएपछि अफिस पुगिसकेपछि निद्रा लाग्नु कुनै अनौठो कुरा होइन । तर, अफिसमा काम गरिरहेका वेलामा निद्रा कसरी भगाउन सकिन्छ त रु काम लाग्न सक्छन् यी टिप्सः
काम गरिरहेका वेला निद्रा लाग्न थाल्यो भने कुनै मन पर्ने गीत मोबाइलमा बजाउनुहोस् । अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ भने कानमा हेडफोन लगाएर गीत सुन्दै काम गर्न सक्नुहुन्छ । निद्रा भगाउने सजिलो उपाय यो पनि हुन सक्छ ।
निरन्तर काम गरिरहेका वेला निद्राले सतायो भने कम्तीमा १५ देखि २० मिनेट बाहिरको वातावरणमा जानुहोस् । अफिसभन्दा थोरै बाहिरको वातावरण अवलोकन गर्नुभयो भने केही हदसम्म निद्रा भाग्न सक्छ ।
निद्राले हदैसम्म सतायो भने एक गिलास चिसो पानी खानुस् । बजारमा अमिलो स्वादका चकलेट पाइन्छ । अफिस जानुपूर्व नै केही चकलेट किनेर लैजानुभयो भने निद्रा लागेको वेलामा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईंको मोबाइलमा पक्कै पनि गेमहरू छन् होला । यदि छैन भने तपाईंको अफिसमा इन्टरनेट अवश्य पनि छ । इन्टरनेटमा विभिन्न खालका गेमहरू हेरेर निद्राबाट बच्न सक्नुहुन्छ ।
अफिसमा निद्रा लाग्यो भने काममा आफैँ बाधा पुगिहाल्छ । तर, निद्राले च्याप्यो भने कम्तीमा पाँचदेखि १० मिनेट फुर्सद निकाल्नुहोस् । आफ्नो नजिकको मिल्ने र धेरै कुरा सेयर गर्ने साथीभाइलाई फोन लगाएर रमाइला गफ गर्नुहोस् । तपाईंको निद्रा गायब हुन सक्छ ।
आजभोलि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक नचलाउने सायदै कम छन् । अफिसमा कामले मारामार भएका वेलामा निद्रा लाग्यो भने फेसबुक खोल्नुहोस् । साथीभाइसँग हेल्लो हाई गर्नुहोस् । अरूका वाल हेर्दै समय गुजार्नुभयो भने पनि निद्राले छोड्न सक्छ ।नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक ०४, २०७४ समय: ६:३२:१३